MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA NORFOLK TERRIER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Norfolk Terrier
Ivy the Norfolk Terrier markuu jiray 2 sano
Liiska Eeyaha Norfolk Terrier Mix Breed
Norfolk Terrier waa eey adag, adag, gaaban, oo yar. Madaxa waxoogaa waa la wareegaa, oo waa la ballaadhiyaa iyadoo qaddar fiican oo bannaan u dhexeeyo dhegaha. Xuubka qaab-qaabeedku waa xoog badan yahay, oo leh joogsi qeexan. Indhaha yar-yar, ee qaab-galka ah ayaa midabkoodu mugdi yahay. Dheguhu way yar yihiin, dhagxankana si adag ayey u sudhan yihiin. Lugaha waa toosanyihiin lugahana way wareegsan yihiin ciddiyaha madow. Dabada dhexdhexaadka ah ayaa la dhigay mid sare, oo leh heer sare oo badanaa badhkood ayaa ku xidhan. Fiiro gaar ah: waa sharci daro in dabada lagu xidho Yurub inteeda badan. Muraayada, jaakad toosan ayaa dhererkeedu yahay hal iyo badh ilaa laba inji. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah guduud, sarreen, cagaar, madow iyo cagaar, ama ku xaji dhibco madow ama aan lahayn iyo mararka qaarkood calaamado cad.
Norfolk Terrier wuxuu ka mid yahay kuwa ugu yar ter Territor shaqeeya. Firfircoon, geesi ah, kalgacal leh, isku dheelitiran oo aan lahayn wax cabsi iyo khilaaf ah. Way fududahay in la tababaro waxayna u baahan tahay sharciyo is raacsan oo la raaco. Eeyadan yaryari qof walba way jecel yihiin waxayna la wanaagsan yihiin carruurta. Sababtoo ah dareenkooda jiirka waxay u egyihiin inay jecel yihiin wax kasta oo aad u tuuri karto si ay u eryan karaan, sida toy, kubbado, ulo ama lafo. Haddii banaanka looga tago muddo dheer iyadoo aan waxba la qaban, iyada oo aan la siinin a socod baako dheer si ay u daadiyaan tamartooda, waxay noqon karaan kuwa wax iibsada iyo kuwa wax qoda. Noocani guud ahaan wuxuu ku fiican yahay xayawaanka kale sida bisadaha iyo eeyaha, laakiin waa inaan lagu aaminin xayawaannada yaryar sida hamster , Jiirka xayawaanka , jiir ama doofaarka guinea . Ha u oggolaan in eeygan yar uu horumariyo Cudurka Dog yar , Halka eygu aamminsan yahay inuu hoggaamiye u yahay aadanaha. Tani waxay sababi kartaa dhibaatooyin dabeecado badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, kala-go'id walaac , masayr iyo ilaalinta dabeecadaha . Waxay noqon karaan adag tahay in guriga la dumiyo .
eey u eg gizmo
Dhererka: 10 inji (25 cm)
Miisaanka: 10 - 12 rodol (4½ - 5½ kg)
Kuwani waa kuwa ugu yar ee terriers.
Khadadka qaarkood waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka dhabarka iyo cudurada indhaha hidde ahaan, laakiin guud ahaan waa caafimaad qabaan.
Norfolks wax fiican kuma qaban doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
Eeyadan yaryar ayaa loo soo saaray inay shaqeeyaan. Way firfircoon yihiin waxayna ku baraaraan nolol firfircoon, waxayna u baahan yihiin in lagu qaato a socod maalinle ah . Way awoodaan orod masaafo gaaban . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Bar iyaga inay galaan oo ka baxaan dhammaan albaabbada iyo iridda ka dambeysa aadanaha.
Qiyaastii 12-15 sano
Jaakada, dhererka dhexdhexaadka ah, jaakad biyo diidan ayaa iska fudud, laakiin shanlaynta iyo cadayashada maalin walba waa muhiim. Yarayn yar ayaa loo baahan yahay. Taxaddar dheeraad ah ka yeelo marka eygu daadinaayo. Maydho oo qallaji shaambo keliya markii loo baahdo. Noocani waa iftiin shidan.
Waxaa laga soo saaray Bariga Anglia, England, Norfolk iyo Norwich Terriers ahaan jiray isku nooc oo leh laba nooc oo dhegood oo kala duwan labadaba waxaa loo yaqaan 'Norwich Terrier'. Ingiriisku waa kii ugu horreeyay ee kala sooca 1964. 1979kii AKC ayaa si rasmi ah ugu aqoonsaday inay yihiin noocyo kala duwan, Norwich oo leh dhago yar yar oo dhego iyo Norfolk oo leh dhago hoos u dhacay. Farqiga kale ee yar ayaa ah Norfolks waa qaab xagal leh Norwich Terriers-na way wareegsan yihiin. Eeyaha waxaa loo adeegsaday inay yihiin jileecyo barnar iyo si bool dawaco tagtay dhulka intii ay ugaarsan jirtay dawaco. Cabbirkooda yar ayaa u oggolaaday inay si fudud ku galaan ugana soo baxaan godadka dawaco. Ka dib dawacooyinka laga daadiyay boholahooda, ugaarsadayaasha faraska fuushan ayaa dib u bilaabi doona baacsiga ugaarsigooda.
Terrier, Terry AKC
CET = Naadiga Isbaanishka ee Argaggixisada ( Naadiga Isbaanishka )
3 bilood jir rednose pitbull
Ivy the Norfolk Terrier sidii eey yar oo jira 9 toddobaad
Jessie casaanka Norfolk Terrier eeyaha ee 9 toddobaad jir
Belle the Norfolk Terrier oo si fiican ugu muuqda jaakaddeeda ciyaaraha
Heerka AKC wuxuu ku baaqayaa Norfolks inuu dabadooda xirmo. Milkiilayaasha Belle waxay go'aansadeen inaysan jarin dabada Belle, taasoo ka dhigeysa mid dabiici ah. Belle ma aha Norfolk kaliya ee dabada dabiiciga ku leh qaybo ka mid ah Yurub waa sharci darro in la gooyo dhegaha eeyaha ama dabo la dhigo dabadooda.
Belle waa Norfolk faraxsan!
chihuahua terrier isku qas madow iyo caddaan
Brody sida eey yar oo 7 toddobaad jir ah waa midab casaan ah oo Norfolk Terrier ah.
Brody sida eey yar oo ah 7 toddobaad jir oo hurdo qaadanaya waa Norfolk Terrier midab casaan leh.
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Terfoll Terrier
Norfolk Terrier Sawirada 1
midig yar oo bernard ah oo iib ah
german adhijir feeder mix brindle
imisa ayey ku kacdaa qalliinka qalitaanka eeygu
iskudhafka qoob ka ciyaarka Afghanistan
madow iyo caddaan isku darka sarkaal labrador